Shiinaha iyo Mareykanka oo ku balamay in ay si wadajir ah u wadashaqeeyaan - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldShiinaha iyo Mareykanka oo ku balamay in ay si wadajir ah u wadashaqeeyaan
March 19, 2017 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Madaxweynaha wadanka Shiinaha Xi Jinping iyo xoghayaha arrimaha dibada Mareykanka Rex Tillerson oo is gacan qaadaya. [Sawirka: Twitter]
Beijing-(Puntland Mirror) Madaxweynaha wadanka Shiinaha Xi Jinping iyo xoghayaha arrimaha dibada Mareykanka Rex Tillerson, ayaa wadahadal ku yeeshay caasimada Shiinaha ee Beijing waxayna direen fariin ah in ay ka wadashaqayn doonaan xoojinta iskaashiga u dhaxeeya labadooda dal.
Kulanka kadib, Xi Jinping ayaa sheegay in isaga iyo Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ay ku balameen khadka taleefoonka bishii lasoo dhaafay.
“Waxaanu u baahanahay in aynu sameyno dadaalo wadajir ah oo lagu kordhinayo iskaashiga u dhaxeeya Shiinaha iyo Mreykanka waxaana aaminsanahay in aan sameyn karno in aan hubino in xiriirku uu horey u socon karo iyadoo ay soo wajahanyihiin habab waxtar leh,” ayuu yiri Madaxweynaha Shiinaha.
Waxa uu ku daray: “Aad baan ugu rajo weynahay sida ugu macquulsan in aan u sameyn karno arrintan, xiriirkuna waxa uu noqon doona mid dhanka wanaagsan aada.”
Tillerson, ayaa dhankiisa sheegay in Madaxweyne Trump uu ku niyadsanyahay xiriirka Madaxweyne Xi uuna diyaar u yahay sidii loo siyaadin lahaa xiriirka u dhaxeeya labada dal.
Xoghayaha arrimaha dibada Mareykanka Rex Tillerson, ayaa maalmihii u dambeeyay safarkiisii ugu horeeyay ku marayay wadamada Asia, waxaana uu soo maray wadamada Japan, iyo Koonfur Kuuriya.
December 13, 2016 Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump oo Rex Tillerson u magacaabay xoghayaha arrimaha dibada
August 31, 2018 Madaxweynaha Soomaaliya oo wadahadalo la yeeshay dhiggiisa Shiinaha
February 10, 2017 Trump oo ku guuldareystay maxkamada racfaanka isku day uu ku rabay soo celinta amarkiisii mamnuucida safarka todobo dal oo Muslim ah
Soomaaliya oo Turkiga ka heshay $ 1 bilyan oo kharash gargaar ah tan iyo sanadkii 2011-kii
Puntland oo munaasabad sagootin ah u qabatay shaqaalihii saarnaa markabkii ganacsi oo dhawaan ay sii daayeen burcadbadeedii afduubatay
Xasan Shiikh oo dalalka Jaamacada Carabta ka codsaday in ay gacan ka geystaan abaarta ka jirta dalka
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Khamiis ah kulan looga hadlayay sidii looga qeybgali lahaa gurmadka abaarta ka jirta dalka la yeeshay diblomaasiyiinta dalalka Jaamacada Carabta u jooga Soomaaliya. Xasan Shiikh ayaa [...]